[Wednesday, April 4th, 18] :: AMISOM oo sheegtay inay la waregtay ammaanka gurriga ummadda
Muqdisho (RH) AMISOM ayaa maanta sheegtay in ay la wareegtay ammaanka xarrunta aqalka hoose ee baarlamaanka, kaddib markii maanta uu ka dhacay kulan ku soo dhammaaday buuq iyo sawaxan.
Taliyaha ciidamada AMISOM Paul Lokech. oo la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari, ku xigeenkiisa labaad Mahad Cabdalla Cawad iyo xildhibaanno ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in wixii maanta ka dambeeya xarrunta baarlamaanka ammaankeeda ay la wareegeen ciidamada AMISOM.
Paul Lokech ayaa sidoo kale sheegay in uu ka xun yahay wixii maanta ka dhacay baarlaaanka isla markaana AMISOM ay ku baaqeyso in la xalliyo khilaafka ka dhex jira hey’adaha sharci-dajinta iyo fulinta.
Xaaladda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaan weli la xallin iyadoo kulankii maanta ee baarlamaanka uu qabsoomi waayey.
Arrintan ayaa sabab u noqotay in maanta magaalada Muqdisho ay kala xirnaato, iyadoo ammaanka si weyn loo adkeeyay waxaana dadka ay ka warsugayaan halka khilaafka taagan uu ku dhammaado.